Ukukhupha uGoogle kwiiVidiyo ezixhasiweyo kwiziphumo zokukhangela Martech Zone
Ukukhupha uGoogle kwiiVidiyo ezixhasiweyo kwiziphumo zokukhangela
NgoLwesithathu, Agasti 11, 2010 NgoLwesibini, Agasti 4, 2015 Douglas Karr
Omnye wethu yokukhangela injini Amaqabane andiphose inqaku ngale mvakwemini ngescreen esithandekayo. Qaphela amakhonkco axhaswe ngezantsi kwesitshixo semephu? Bukela iividiyo malunga neshishini lethu.
Kudala ndityhala bonke abathengi bam ngecustomelle yendawo ukuba bafumane Amaphepha eGoogle phezulu (ngaphambili ibisisishishini saseKhaya kuGoogle) KANYE bendihlala ndityhala abathengi ukuba baqale ukusebenzisa yokuzonwabisa njengenxalenye yesicwangciso sabo sentengiso kwi-Intanethi (Singo!)… Kodwa oku kutshata aba babini kunye.
Kuya kufuneka ubandakanye 3 izivamvo iindwendwe ezinazo ezikwi-intanethi kwaye ziphanda imveliso okanye inkonzo yakho. Ukutshata ividiyo ukukhangela iziphumo zekhasi kunye neemephu lithuba elihle lokufikelela kubaphulaphuli abangazukuphendula kwisicatshulwa esicacileyo. Ividiyo yindawo ephakathi efumana 'i-hump yokuthembela' ngokukhawuleza okukhulu kunentengiso yesiko okanye kwizithuba zebhlog ezingaguquguqukiyo.
tags: iziphumo kuGoogleIiVidiyo zeNtengisoinyokaIvidiyo exhaswayo
Ukubhengezwa kweNkampani yeDummies kulapha!
I-SEOmoz ikhupha uMama wazo zonke iiNkqubo ze-SEO